အသည်းကွဲပျောက်ဆေးဆိုတာ တကယ်ရှိလား? - For her Myanmar
‘အသည်းကွဲရင် ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေး၊ မင်းမရှိရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခုထိရှာလို့မတွေ့’ ဒီသီချင်းစာသားလေးက ဒီတစ်လော အရမ်းဟော့ဖြစ်နေတယ်နော့်။ တကယ်လည်း လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်မသိလိုက်သေးခင် အချိန်မှာ ရင်ထဲကနေ နစ်နစ်ကာကာချစ်သွားပြီး အဲဒီကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အနားကနေ အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ ရူးမတတ်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အသည်းကွဲတဲ့ ဒဏ်ရာတွေပေါ့…
ဟုတ် နှင်းလည်းဒီလိုအချိန်မျိုးကို ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ချစ်လွန်းလို့ အစစအရာရာ အနွံတာခံ၊ သည်းခံပြီးကိုယ့်အနားမှာ နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဆိုးနည်းပေါင်းစုံနဲ့ အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ့်အနားကနေ ထွက်သွားတော့မှ သွေးရူးသွေးတမ်းနဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ဉာဏ်ပေါင်းစုံသုံးပြီး ကိုယ့်အနားပြန်ဆွဲထားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ကံကြမ္မာကြီးက ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိတော့ သူနဲ့ဝေးရာကိုပဲ ပိုဝေးဝေးထွက်သွားရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရတယ်။ အင်းပေါ့ အသည်းစကွဲတယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာပေါ့။ (အရက်ပြန်သောက်ဖို့အထိပါ ကြိုးစားခဲ့တာပါဆို) အိပ်ရာထဲမှာ ဘုန်းဘုန်းလဲပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိရှိသမျှအရာအားလုံးက မှောင်မည်းနေသလို၊ အစားလည်းမစားနိုင် ညအိပ်ရင်လည်း ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ကြီး လန့်နိုးလိုနိုး၊ စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာ ‘သြော် သူတကယ်ငါ့အနားမှာ မရှိတော့ဘူး’ ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးက ကိုယ့်ကိုအပ်နဲ့တဆစ်ဆစ်ထိုးနေသလိုကို ခံစားရတာ။
Related Article >>> သူကလမ်းမခွဲချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ပြတ်သားနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
နောက်ပြီး သူနောက်တစ်ယောက်နဲ့ date စလုပ်နေပြီလို့ သေသေချာချာသိလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက သူပေးခဲ့သမျှ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ချက်ချင်းတစ်ခုစီဆွဲထုတ် အမှိုက်ပုံးထဲသွားပစ်ပြီး သူနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဆွဲဖြဲရင်း အကုန်တစ်ခုစီ မီးရှို့၊ မီးကုန်သွားတဲ့အထိ တစ်ယောက်တည်း မီးခိုးတွေကို ကြည့်ငိုခဲ့တာ။ ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း မျက်နှာပြောင်၊ စာသင်လည်း တစ်ခါတလေ ငုတ်တုပ်မေ့၊ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း အိမ်သာထဲသွားပြီး အော်ငို စသည်ဖြင့် ရင်ဘတ်ထဲက နာကျင်ခံစားနေရသမျှ သက်သာအောင် နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကုစားခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီအချိန်အထိ နှင်းသာမန်ဘဝကို ပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ ကဲ အဲ့တော့ ဒီတမစ်ယောက်ကို အစားထိုးဖို့ ငါနောက်တစ်ယောက် ထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ ရည်းစား ၃ ယောက်လောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ သူများသားသမီးကို ဒုက္ခသက်သက်သွားပေးရုံကလွဲပြီး ဒဏ်ရာတွေလည်း မသက်သာခဲ့ဘူးပေါ့…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၇ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်မှာ အချစ်ကလွဲပြီး ကျန်တာကိုးကွယ်စရာမှ မရှိခဲ့တာ။ အချစ်တောင်မှ သူ့ဆီကမရရင် သေရပါတော့မယ်ဆိုတာမျိုးလေ။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းသိလား၊ တကယ်တမ်းကျတော့လေ တစ်သက်လုံး သူကလွဲရင် မချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ထားခဲ့သမျှလည်း ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေပြီး ရှေ့ဆက်လို့ရလောက်မယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ်လာမှာပဲ၊ သူ့ကြောင့်အသည်းတွေကွဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမယ်လို့ စဉ်းစားမိပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လုပ်တော့မယ်လို့ တွေးတဲ့အတွေးကလည်း ကိုယ့်မိဘမျက်နှာကို မျက်လုံးထဲပြန်မြင်ယောင်ပြီး ပျောက်သွားတာပဲ၊ အချစ်ကြောင့် ကိုယ့်ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးပျက်သွားတယ်လို့ တွေးမိလည်း ခဏလောက်ပါပဲ။ အချိန်တစ်ခုလောက်ကျရင် အရာအားလုံးက သူ့နေရာနဲ့သူ နေသားတကျ ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို အသည်းကွဲပျောက်ဆေးက အချိန်ပေါ့? တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုး မဟုတ်သေးပြန်ဘူး…
Related Article>>> ခလုတ်တိုက်မိသောနှလုံးသားများသို့~
တကယ်တမ်းတော့ အသည်းကွဲပျောက်ဆေးဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ အရာအားလုံးက ကိုယ့်စိတ်၊ ကိုယ့်ခံယူချက်၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ဘဝကဆက်ဖြစ်လာတာပါ။ နှင်းဆိုလည်း လပိုင်းလောက် စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ နေလာပြီးတော့ အချိန်တန်ပြီ ငါ့ဘဝအတွက်ငါစဉ်းစားမှဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါ အလုပ်တွေဘာတွေဝင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာရှေ့ဆက်ရတော့တာပဲ။ (နောက်မှ ဖူးစာပြန်ပါပြီး ပြန်တွဲဖြစ်တာက တစ်ကဏ္ဍပေါ့အေ 😛 )ဒီလိုပဲပေါ့ ဘဝမှာ အချိန်တိုင်းတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကြီးပဲ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ၊ တစ်ခါတလေမှာတော့ အကျလေးတွေရှိရင် ရှိမှာပေါ့။ အရေးကြီးတာက ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးရွားနေပါစေ၊ ကိုယ်ရုန်းထွက်ချင်ရင် ရပါတယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေး ဝင်နေဖို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကလည်း ထပ်ကာထပ်ကာ ပြန်ပြီးမွေးဖွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် အသည်းတစ်ခါကွဲတိုင်း၊ ဒဏ်ရာတစ်ခါရတိုင်း ပြန်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပါစေနော့်…
‘အသညျးကှဲရငျ ပြောကျတယျဆိုတဲ့ဆေး၊ မငျးမရှိရငျ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ဆေး ကမ်ဘာပျေါမှာ အခုထိရှာလို့မတှေ့’ ဒီသီခငျြးစာသားလေးက ဒီတဈလော အရမျးဟော့ဖွဈနတေယျနေျာ့။ တကယျလညျး လူတဈယောကျကို ကိုယျမသိလိုကျသေးခငျ အခြိနျမှာ ရငျထဲကနေ နဈနဈကာကာခဈြသှားပွီး အဲဒီကိုယျသိပျခဈြတဲ့သူက ကိုယျ့အနားကနေ အကွောငျးတဈစုံတရာကွောငျ့ ထှကျခှာသှားတဲ့အခါ ရငျထဲမှာ နာနာကငျြကငျြနဲ့ ရူးမတတျခံစားရတတျပါတယျ။ အသညျးကှဲတဲ့ ဒဏျရာတှပေေါ့…
ဟုတျ နှငျးလညျးဒီလိုအခြိနျမြိုးကို ကွုံခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကိုယျ့အပျေါခဈြလှနျးလို့ အစစအရာရာ အနှံတာခံ၊ သညျးခံပွီးကိုယျ့အနားမှာ နတေဲ့လူတဈယောကျကို ဆိုးနညျးပေါငျးစုံနဲ့ အမြိုးမြိုးနှိပျစကျပွီး နောကျဆုံး ကိုယျ့အနားကနေ ထှကျသှားတော့မှ သှေးရူးသှေးတမျးနဲ့ ကလိမျကကဈြဉာဏျပေါငျးစုံသုံးပွီး ကိုယျ့အနားပွနျဆှဲထားဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေဲ့ ကံကွမ်မာကွီးက ကိုယျ့ဘကျမှာမရှိတော့ သူနဲ့ဝေးရာကိုပဲ ပိုဝေးဝေးထှကျသှားရတဲ့ အခွအေနကေို ရောကျခဲ့ရတယျ။ အငျးပေါ့ အသညျးစကှဲတယျဆိုတာ အဲဒီအခြိနျမှာပေါ့။ (အရကျပွနျသောကျဖို့အထိပါ ကွိုးစားခဲ့တာပါဆို) အိပျရာထဲမှာ ဘုနျးဘုနျးလဲပွီး ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိရှိသမြှအရာအားလုံးက မှောငျမညျးနသေလို၊ အစားလညျးမစားနိုငျ ညအိပျရငျလညျး ညဉျ့နကျသနျးခေါငျကွီး လနျ့နိုးလိုနိုး၊ စက်ကနျ့တိုငျးစက်ကနျ့တိုငျးမှာ ‘သွျော သူတကယျငါ့အနားမှာ မရှိတော့ဘူး’ ဆိုတဲ့စိတျကွီးက ကိုယျ့ကိုအပျနဲ့တဆဈဆဈထိုးနသေလိုကို ခံစားရတာ။
Related Article >>> သူကလမျးမခှဲခငျြပမေဲ့ ကိုယျ့ဘကျက ပွတျသားနရေငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ
နောကျပွီး သူနောကျတဈယောကျနဲ့ date စလုပျနပွေီလို့ သသေခြောခြာသိလိုကျတဲ့အခြိနျတုနျးက သူပေးခဲ့သမြှ ပစ်စညျးတှအေားလုံးကို ခကျြခငျြးတဈခုစီဆှဲထုတျ အမှိုကျပုံးထဲသှားပဈပွီး သူနဲ့အတူရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံတှကေို ဆှဲဖွဲရငျး အကုနျတဈခုစီ မီးရှို့၊ မီးကုနျသှားတဲ့အထိ တဈယောကျတညျး မီးခိုးတှကေို ကွညျ့ငိုခဲ့တာ။ ကြောငျးသှားတဲ့အခြိနျမှာလညျး မကျြနှာပွောငျ၊ စာသငျလညျး တဈခါတလေ ငုတျတုပျမေ့၊ တဈခါတလကေတြော့လညျး အိမျသာထဲသှားပွီး အျောငို စသညျဖွငျ့ ရငျဘတျထဲက နာကငျြခံစားနရေသမြှ သကျသာအောငျ နညျးပေါငျးစုံသုံးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကုစားခဲ့ပမေဲ့ အဲဒီအခြိနျအထိ နှငျးသာမနျဘဝကို ပွနျမရခဲ့ပါဘူး။ ကဲ အဲ့တော့ ဒီတမဈယောကျကို အစားထိုးဖို့ ငါနောကျတဈယောကျ ထားမယျဆိုတဲ့စိတျမြိုးနဲ့ ရညျးစား ၃ ယောကျလောကျထားခဲ့ပမေဲ့ သူမြားသားသမီးကို ဒုက်ခသကျသကျသှားပေးရုံကလှဲပွီး ဒဏျရာတှလေညျး မသကျသာခဲ့ဘူးပေါ့…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၇ နှဈပဲရှိသေးတဲ့ မိနျးမငယျတဈယောကျမှာ အခဈြကလှဲပွီး ကနျြတာကိုးကှယျစရာမှ မရှိခဲ့တာ။ အခဈြတောငျမှ သူ့ဆီကမရရငျ သရေပါတော့မယျဆိုတာမြိုးလေ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးသိလား၊ တကယျတမျးကတြော့လေ တဈသကျလုံး သူကလှဲရငျ မခဈြနိုငျတော့ဘူးလို့ ထငျထားခဲ့သမြှလညျး ကိုယျ့အတှကျအဆငျပွပွေီး ရှဆေ့ကျလို့ရလောကျမယျဆိုတဲ့ လူမြိုးက တဈခြိနျခြိနျမှာ ပျေါလာမှာပဲ၊ သူ့ကွောငျ့အသညျးတှကှေဲပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသမေယျလို့ စဉျးစားမိပွီး ဖွဈခငျြရာဖွဈ လုပျတော့မယျလို့ တှေးတဲ့အတှေးကလညျး ကိုယျ့မိဘမကျြနှာကို မကျြလုံးထဲပွနျမွငျယောငျပွီး ပြောကျသှားတာပဲ၊ အခဈြကွောငျ့ ကိုယျ့ကမ်ဘာကွီး တဈခုလုံးပကျြသှားတယျလို့ တှေးမိလညျး ခဏလောကျပါပဲ။ အခြိနျတဈခုလောကျကရြငျ အရာအားလုံးက သူ့နရောနဲ့သူ နသေားတကြ ပွနျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါဆို အသညျးကှဲပြောကျဆေးက အခြိနျပေါ့? တဈစိတျတဈပိုငျးတော့ ပါကောငျးပါပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ နိုး မဟုတျသေးပွနျဘူး…
Related Article>>> ခလုတျတိုကျမိသောနှလုံးသားမြားသို့~
တကယျတမျးတော့ အသညျးကှဲပြောကျဆေးဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပါပဲ။ အရာအားလုံးက ကိုယျ့စိတျ၊ ကိုယျ့ခံယူခကျြ၊ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့အတိုငျး ကိုယျ့ဘဝကဆကျဖွဈလာတာပါ။ နှငျးဆိုလညျး လပိုငျးလောကျ စိတျဆငျးရဲ၊ ကိုယျဆငျးရဲနဲ့ နလောပွီးတော့ အခြိနျတနျပွီ ငါ့ဘဝအတှကျငါစဉျးစားမှဖွဈတော့မယျ ဆိုတဲ့စိတျမြိုးဖွဈလာတဲ့အခါ အလုပျတှဘောတှဝေငျပွီး ကိုယျ့ဘာသာရှဆေ့ကျရတော့တာပဲ။ (နောကျမှ ဖူးစာပွနျပါပွီး ပွနျတှဲဖွဈတာက တဈကဏ်ဍပေါ့အေ 😛 )ဒီလိုပဲပေါ့ ဘဝမှာ အခြိနျတိုငျးတော့ ကိုယျဖွဈခငျြတာကွီးပဲ ဘယျဖွဈပါ့မလဲ၊ တဈခါတလမှောတော့ အကလြေးတှရှေိရငျ ရှိမှာပေါ့။ အရေးကွီးတာက ဘယျလောကျပဲ ဆိုးရှားနပေါစေ၊ ကိုယျရုနျးထှကျခငျြရငျ ရပါတယျ ဆိုတဲ့စိတျမြိုးလေး ဝငျနဖေို့ပါပဲ။ ပွီးတော့ အခဈြဆိုတဲ့အရာကလညျး ထပျကာထပျကာ ပွနျပွီးမှေးဖှားတတျပါတယျ။ တဈခုတော့ရှိတယျ အသညျးတဈခါကှဲတိုငျး၊ ဒဏျရာတဈခါရတိုငျး ပွနျကုသနိုငျတဲ့ဆေးရှိတယျဆိုတာကိုတော့ သိပါစနေေျာ့…
Tags: #overcome, break, Cure, Heart, injures, Medicine, Real
Hnin Ei Oo December 27, 2018
လောကဓံကို အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ခါးသီးပေမဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ
For Her Myanmar March 22, 2019
Yin Sandi Ko March 15, 2019